musha > Travel Europe > 5 Most Famous Streets In Paris To See
Pane zvakawanda kwazvo norudo pamusoro Paris. Ndokupi kwaunofunga kunyange kutanga, rudyi? The changouya mumusoro iri nzvimbo huru wakafanana Eiffel Tower uye Louvre. Asi wadii uyewo kuziva matombo anokosha akavanzwa muguta? Ngatitangei pamwe 5 Most Famous Streets muParis To See!
Rail Transport ndiye Most zvakatipoteredza Friendly Way To Travel uye ndosaka fungiri nyaya yakanga yakanyorwa kuti kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
Avenue Victor Hugo iri nzira iri rechi16 arrondissement muParis. Kutangira Charles de Gaulle (anonziwo Etoile) akaguma Tattegrain (achiva avhenyu Henri Martin). Zvinonzi mumwe gumi nzira kutanga Etoile, uye yechipiri-refu pane gumi nevaviri, mushure Avenue des Champs Elysees.
Zita pashure yakakurumbira Victor Hugo, uyo akapedza mazuva ake okupedzisira ari Hotel Particulier. A Chidhori Hugo anogona kuwanika mharadzano pamwe avhenyu Henri Martin. Avenue Victor Hugo ndiyo inozivikanwa kwayo kusimba yakanaka akitekicha riri wakakwana nokuda chekanguva remba uye mukuru Instagram mufananidzo! Itai nokuti giremu!
2. Avenue mbuya
Fan of dhanzi? Zvino ichi mugwagwa ukurumbire Paris ndechenyu! mugwagwa Ichi kumusha Theater of Champs Elysees. The dhanzi ndiwo musha huru vairidza maviri. Kana uine zvishoma zvokuwedzera nguva, isu zvirokwazvo tinokurudzira kubhadhara kushanya kune ino nhoroondo nzvimbo yekuitira. Mukuwedzera, nzira iyi anokudzwa nokuda kukosha kwayo kuti fashoni indasitiri. mavanga mazhinji wakakurumbira anogona kuwanikwa pano kusanganisira Vuitton, naH, Celine, uye zvakawanda.
Ready kupinda mumoyo Paris? Zvadaro mugwagwa uyu anofanira kuva zvako 5 Most Famous migwagwa Paris! Izvi zvikuru vakawanda, nesimba mumugwagwa anomhanya nepakati Paris, kuenderana kurwizi Seine. Zita pashure mangwanani kukunda Napoleon panguva hondo Rivoli, ichi Boulevard yakaisvonaka kumusha Louvre uye Tuileries Garden. Royal Palace, chete pedyo Louvre, ndiro nzvimbo yakakwana kunakirwa zuva ari sunlit mapindu. Ndicho kumugwagwa zvakakwana kana uchida kubata muchidimbu yekare revatongi divi Paris. Regai kuchipotsa!
4. nomungoro ndima
Kutora pfupi kubva hombe boulevards kuti kudzora vakawanda Paris huru kuburikidza nhumbi, Ndima Couverts muri kupfuura unodziya chisarudzo. Izvi akafukidza kunotenga alleys kuita terrific kunotoda kuburikidza muguta. Unogona kuwana sokunofadza cafes, Pubs, oornag kunotenga. Kwete chete kuti, asi mavakirwo nomungoro alleys izvi ndizvo chaizvo naka saka regai kurasikirwa navo!
Lyon Airport kuAvignon Zvitima
Montmartre chaiva imwe nguva vaiona kuti sechiteshi Paris kuti unyanzvi revanhu. Zvinosuruvarisa, yepamusoro mitengo somugumisiro ushanyi ndakudzingirai dzakawanda vemifananidzo kupinda nharaunda dzakasiyana. Ikoko iwe unogona kuwana iyo Boulevard de Clichy iri kumusha kweMoulin Rouge neParis red-light district. Uchawana Nightlife uye yakanaka nguva hapana Matter nguva ipi yezuva ukasarudza kushanya. Funga kushanyira Moulin Rouge achiona cabaret unongotaura!
Shongai rwaunofarira peya kufamba neshangu, uye kusvika Paris kuona 5 Most Famous migwagwa Paris! Need chokufambisa? Akafunga haumbofi kubvunza! Anobatirira tikiti kubva Save A Train, ikozvino. Unogona kubhuka mumasekonzi pasina mari yekuwedzera kana yakavanzwa.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Most Famous Streets In Paris To See” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/famous-streets-paris/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#chave europetravel longtrainjourneys trainjourney chitima mazano travelfrance travelparis